Wararka - Waa maxay Zirconia Block?
Sida aan wada ognahay waxaa jira saddex nooc oo alaab ah oo loo isticmaalo dib u soo celinta ilkaha: alaabada xannibaadda zirconia iyo walxaha birta ah. Zirconium oxide waxay u dhacdaa sida monoclinic, tetragonal iyo crystal cubic. Qaybaha si qallafsan u qallafsan ayaa loo soo saari karaa qaabab kubadeed iyo/ama tetragonal crystal ah. Si loo dejiyo qaab -dhismeedyadani qaaliga ah, dejiyeyaasha sida magnesium oxide (MgO) ama yttrium oxide (Y2O3) ayaa loo baahan yahay in lagu daro ZrO2.
Sababta zirconia block waa sheyga ugu habboon ilkaha dib u soo celinta?
Aynu ka hadalno qaab -dhismeedka zirconia. Xannibaadda zirconia ilkaha waxay ka samaysan tahay oxide crystalline oxide of zirconium, waxayna ka kooban tahay atom bir ah oo ku jirta kristalka laakiin marna looma tixgeliyo biraha. Sababtoo ah sifooyin waara oo aan iswaafaqsanayn, dhakhaatiirta qalliinka ama dhakhaatiirta ayaa u adeegsada xannibaadda zirconia ilkaha sanbabada kala duwan. Xitaa waxaa loo adeegsadaa galinta maaddaama loo tixgeliyo inay tahay maaddada ugu xoogga badan.
In kasta oo alaabooyin badan loo adeegsado warshadaha ilkaha, baalka ilkaha zirconia oo sidoo kale loo yaqaan block dhoobada ayaa ugu caansan dhakhaatiirta ilkaha iyo bukaanka.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka loogu talagalay xannibaadaha zirconia ilkaha:
-Sida loo farsameeyo iyadoo la isticmaalayo horumarinta farsamada sare. Iyada oo ay adag tahay jabka, ballaarinta kuleylka oo la mid ah birta kabka, xoogga foorarsiga oo aad u sarreeya iyo xoogga gilgilka, iska caabbinta sare ee xirashada iyo daxalka, tabinta kuleylka oo hooseeya
- Sidoo kale, waxaa ansixiyay wakaaladaha qaranka. Sidoo kale, baloogyadan ayaa maray xoogaa tijaabo ah oo daahir ah, si loo hubiyo inay si buuxda ammaan u tahay in la isticmaalo.
–Boodhka ilkaha zirconia waa badeecad tayo sare leh, sidoo kale waxay ilkaha ka dhigtaa mid sii waarta oo dabiici ah.
–Markii badeecada lagu beero gudaha bukaanka, waxay siin doontaa badeecad nolol raagis ah.
–Faa’iidooyinka kale ee muhiimka ah ee xannibaadda zirconia ilkaha ayaa ah inay yareyn doonto waqtiga qalajinta ka hor oo ay hagaajin doonto aragtida muuqaalka inta lagu jiro waqtiga midabaynta.
- Astaamaha ugu muhiimsan ee badeecadani waa inay lahaan kartaa midab kasta oo dabiiciga ah oo soo muuqda, sidoo kale waxay la jaan qaadi kartaa cabbir kasta iyo qaab kasta.
Waqtiga dhejinta: Jul-17-2021